भूलेर पनि नराख्नुहोस् बच्चाको यस्तो नाम, नत्र पूरै जिन्दगी हुन्छ बदनाम | Rochak
June 22, 2021 NepstokLeaveaComment on भूलेर पनि नराख्नुहोस् बच्चाको यस्तो नाम, नत्र पूरै जिन्दगी हुन्छ बदनाम
काठमाडौँ । ‘ठूलो भएपछि आफ्नो नाम राख्नुपर्छ’, ‘धेरै पढेर आफ्नो नाम प्रशिद्ध बनाउनुपर्छ’, ‘नाम बदनाम हुने काम कहिल्यै गर्नु हुँदैन।’
हामी बच्चालाई यसै भन्छौं। अर्थात उनीहरुलाई बुझाउँछौं कि, ‘नाम’ भन्ने कुरा सित्तिमिती चिज होइन। चानचुने कुरा होइन। भन्छौं, ‘तिमी जीवनभर जे गर्छौं, त्यसले तिम्रो नाम उँचो बनाउनुपर्छ।’
नाम भनेको उसलाई चिनाउने, इंगित गर्ने यस्तो सांकेतिक कुरा हो, जो उनको पहिचान बन्छ । यसो सोच्दा ‘नाम’ भन्ने कुरा सामान्य लाग्छ । तर, अर्को तरिकाले सोच्दा ‘नाम’ भन्ने कुरा निकै गतिलो लाग्छ ।
हामी जीवनभर त्यही नाम बोकेर बाँच्छौं । आफु मरेपनि ‘नाम’ बाँचिरहोस् भन्ने आकंक्षा राख्छौं । यति मूल्यवान् छ, नाम । त्यही कारण त अहिलेका आमाबुबालाई आफ्ना ‘छोराछोरीको नाम के राख्ने’ भन्ने विषयले निकै सोचमग्न बनाउने गर्छ ।
यो प्रसंग तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ, तर अनावश्यक लाग्नेछैन । किनभने जीवनको कुनै चरणमा तपाईंले भोग्नुपर्ने, भोगिसकेको वा भोगिरहेकै कुरा हो यो ।
बच्चाको नाम के राख्ने ?
सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर धेरै अभिभावकले अनुवभ गरेको कुरा हो कि बच्चाको नाम छनौट गर्न कति गाह्रो हुन्छ । भन्न त के भनिन्छ भने, नाममा के छ र ?
तर, त्यही नामले आमाबुबाको माथिंगल हल्लाइदिन्छ, जब बच्चाको न्वरान गर्ने बेला हुन्छ । न्वरान त हामी परम्परागत संस्कार अनुसार गर्छौं ।
पुरोहित वा कुनै धर्मगुरुले बच्चाको जन्म, घडी, पाला, बार, समय आदिको आधारमा नाम राखिदिन्छन् । तर, त्यस्तो नामले आमाबुबाको चित्त बुझ्दैन । आफुले जन्माएको बच्चालाई आफैले कुनै प्रिय नाम दिन चाहन्छन् उनीहरु ।
नाम भनेको बच्चाको पहिचान हो । जीवनभर उसले त्यही नाम बोकेर हिँड्छ । त्यही नामले उनी चिनिन्छन् ।
हुन त कतिपय पति-पत्नीले बच्चा गर्भमा छँदै हुनेवाला बच्चाको नाम के राख्ने भनेर मोटामोटी सूची तयार गरिसकेका हुन्छन् । अझ कतिपयले त लभ अफेयरमा रहेकै बेला पछि जन्मने बच्चालाई यस्तो नाम दिने भनेर संभावित नामहरु खोजिसक्छन् । तर, सबैको हकमा यस्तो हुँदैन ।
अर्कोतिर पतिले सिफारिस गरेको नाममा पत्नीले चित्त नबुझाउन सक्छिन् । पत्नीले खोजेको नाम पतिले अनुमोदन नगरिदिन सक्छ । त्यसैले बच्चा नाम राख्नु चानचुने वा सोचेजस्तो सजिलो कुरा चाहि होइन ।
हामीसँग हुर्किएका एउटा पुस्ता छन्, जसको नाम राम, श्याम, कृष्ण, हरी छन् । अब नयाँ जन्मने बच्चाका लागि यी नामहरु ‘डेट एक्सपायर’ भए ।
किनभने तपाईको टोल, छिमेकमा यस्ता नामधारी छ्यापछ्याप्ती भेटिन सक्छन् । एउटालाई बोलाउँदा, अर्कोलाई सम्बोधन हुनपुग्छ । त्यसैले आपसमा मिल्ने, जुध्ने नामहरु भन्दा पृथक नाम खोजिदिने गरिएको छ ।
आमाबुबा चाहन्छन् कि, आफ्नो बच्चाको नाम यस्तो होस्, जो उच्चाहरण गर्दा मिठासयुक्त सुनियोस् । लयात्मक लागोस् । अर्थपूर्ण होस् ।
कतिपय आमाबुबाले आफ्नै नामको पहिलो अक्षर सापटी लिएर बच्चाको नाम जुराउँछन् । कतिले गुगल सर्च गरेर बच्चाको नाम खोज्छन् । कतिले यसका लागि शब्दकोश पल्टाउन थाल्छन् । कतिले चर्चित व्यक्तित्व एवं सेलिब्रेटीको नाम आफ्नो बच्चाका लागि जुराइदिन्छन् ।
प्रदेशकै ठूलो अस्पतालमा युवतीहरु यस्तो अवस्थामा रंगेहात फेला।एकाएक यो अस्पतालको खुल्यो पोल।